अब रङ्गशाला बनेरै छोड्ने छ! के भित्रियो यस्तो (भिडियो सहित) - Complete Nepali News Portal
समाजसेवी इशा गुरुङको प्रसंसा गर्दै सिता राम कट्टेल आफ्नो फेसुबुक वालमा लेख्नु हुन्छ !
प्रवासमा रहेर पनि नेपालका लागी निरन्तर सामाजिक काममा सक्रिय समाजसेवी आदरणिय दिदी ईशा गुरुङ्गले जनस्तरबाट निर्माण हुन लागेको ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला’ निर्माण अभियानका लागी ५ लाख आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएकोमा हामी निकै खुसी छौं । आदरणिय दिदीले धुर्मुुस सुन्तली फाउण्डेशनको हरेक परियोजनामा स्वस्फूर्त सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । नेपालका लागी अनि नेपाली खेलाडीहरुको भविष्यको लागी निर्माण गर्न लागिएको यस परियोजनाका लागी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएकोमा दिदी ईशा गुरुङ्गलाई हार्दिक धन्यवाद । यस राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा सम्पुर्णलाई आ-आफ्नो स्थानबाट जोडिनुभई यस परियोजना सम्पन्न पार्न सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछौं ।
यो पनि पढ्नुहोस : अब रङ्गशाला बनेरै छोड्ने छ (भिडियो सहित)
उपस्थित महानुभाबहरुले DPR उत्कृष्ट रहेको प्रतिकृया दिनु भएको छ। हामी सम्बन्धित मन्त्रालय,खेलकुद परिषद,नेपाल क्रीकेट संघमा समेत DPR प्रस्तुति गर्नेछौ। र त्यस पश्च्यात थप आएका सल्लाह सुझाबको आधारमा DPR लाई फाईनल रुप दिनेछौ। रंगशाला निर्माणको लागि गठित प्राबिधिक समितिको निर्देशनमा क्रीयटिभ डिजाइन आर्किटेक प्रा लिको नेतृत्वमा ईन्डियन र अमेरिकन कन्सलटेन्सिको सहकार्यमा Dpr तयार भएको समेत जानकारी गराउदछु। (सिता राम कट्टेल)